Momba anay - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Andao ataovy mora kokoa ny goba
Manolo-tena isika hitondra ny haitao fanontana 3D mety afaka mandray anjara
amin'ny indostria ho avy ary mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
Orinasa mitombo manana laza ambony Miara-miasa amin'ny mpanonta printy 3D Multi-teknolojia vaovao. Vidiny mora vidy Ampitahao amin'ny marika hafa, fa aza milefitra amin'ny kalitao.
Toeram-panjakan'ny 5000 m2 mahery. Ny fahaizan'ny famokarana isam-bolana dia mihoatra ny andalana fitsapana matihanina miisa 500
Maherin'ny 20 mpikambana R&D matihanina. Mampitombo ny fampiasam-bola amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra.
Tombony aorian'ny fivarotana
Manana ekipa mpanohana be zotom-po amin'ny fanohanana an-tserasera an-tserasera Max 4 ora 'tahan'ny valiny haingana Fanohanan'ny video ho an'ny karazana vahaolana rehetra isa ambony ho an'ny fanohanana an-tserasera avy amin'ireo mpampiasa efa misy.
Misy fomba maro hifandraisana aminay. Soraty izay rehetra momba ny tadiavinao. Miaraka aminao foana izahay hanome ny tolotra tsara indrindra ho anay. EcubMaker Mino ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Omeo anay ny fotoana hanompoanao.
Ho an'ny fanadihadiana ankapobeny:
Ho an'ny fanadihadiana amin'ny varotra:
Ho an'ny famerenana fanadihadiana:
Araho izahay ao amin'ny media sosialy hanavaozana ny momba ny vokatra sy ny tolotra vaovao.